Baadhitaanka bannaan ee Juno wuxuu ina tusayaa quruxda tiirarka Jupiter | Saadaasha Shabakadda
SAWIRRO: Baadhitaanka bannaan ee Juno wuxuu ina tusayaa quruxda tiirarka Jupiter
Labada tiir ee Jupiter waxaa qaaday baaritaanka »Juno».
Markii ugu horreysay taariikhda aadanaha, Waxaan ka daawan karnaa qolka fadhiga ee guryaheena tiirarka Jupiter, meere gaas ah oo ku yaal masaafo qiyaastii ah, aan ka badnayn oo aan ka yarayn, in ka yar 588 milyan oo kilomitir. Dhamaantiisna waa ku mahadsantahay NASA, iyo waliba si gaar ah baaritaankeeda hawada "Juno".
Sawirada uu soo qaaday waxaad ku arkeysaa belaayo dhab ah oo ka mid ah duufaanno u eg oval kuwaas oo leh dabeecad iyo halabuur aan ilaa hadda lagu arag meere kale oo ka tirsan Nidaamka Qorraxda. Barta Woqooyi duufaanno waawayn, 1.400 oo kiilomitir oo dhexroor ah, ayaa la helay.
Sawirka - Craig Sparks
In kasta oo aysan jirin kaliya duufaano cajaa’ib leh, haddana way arkeen daruuro cabiraya qiyaastii 7.000 kilomitir oo dhexroor ah oo si fiican uga sarreeya inta kale ee Pole North. Waqtigaan la joogo, lama oga sida ifafaalaha cajiibka ah ee noocaas ah loo sameysan karo; Si kastaba ha noqotee, markii la baranayay xogta ku saabsan heerkulka lakabyada hoose ee jawiga, waxaa la ogaaday taas xaddi badan oo ammonia ah oo ka imanaya meelaha qoto dheer ayaa gacan ka geysta samaysankooda.
Baaritaanka hawada sare »Juno» ayaa noqday kii ugu horeeyey ee daawada qubeyska elektarooniga ee ku dhacaya jawiga, Taas oo abuuraysa nalalka woqooyi ee meeraha gaaska leh. Toban sano ka hor baaritaanka NASA ee Pioneer 11 wuxuu maray 43.000 mayl daruuraha, laakiin "Juno" ayaa toban jeer ka soo dhawaaday, marka saynisyahannada kuma aysan adkaan inay cabbiraan xoogga aaladda magnetka. Natiijadu waxay noqotay 7.766 gaus, laba jibaar waxa la xisaabiyay ilaa hada. Si aad fikrad uga hesho waxa ka dhacaya meeraha gaaska leh, waa inaan ogaano in xooga dhul magnetka uu yahay 100 gaus, oo qiyaas ahaan u dhigma soo jiidashada bar magnet oo u janjeera 11 darajo marka loo eego dhidibka. adduunka.
Duufaan ka socota meeraha Jupiter. Sawir - NASA
Pole-ka Koofureed ee Jupiter, waxaa qaaday »Juno». Sawir - NASA
Juno, oo ah cabbirka maxkamadda kubbadda koleyga, waa dayax gacmeed oo isticmaal kaliya tamarta qoraxda waxaa qabtay qabqablayaasha waaweyn. Kaamirooyinka iyo inta kale ee cilmiga sayniska waxaa lagu gaashaamanayaa titanium si markaa looga ilaaliyo shucaaca uu sii daayo Jupiter. Laakiin Ismiidaamintiisa waxaa loo qorsheeyay: waxay noqon doontaa 20-ka Febraayo, 2018, marka uu soo galo lakabyada sare ee jawiga si loo arko haddii ay jirto udub dhexaad dhagax sidii muddo dheer la aaminsanaa. Hadday sidaas tahay, oo maadaama Jupiter uu ahaa meeraha ugu horreeyay ee aasaasa, u caddeyn lahaa saynisyahannada noocyada maaddooyinka ka jiray Nidaamkii Qorraxdu ugu horreysay.
Haddii aad rabto inaad aragto sawirro dheeri ah, riix halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » SAWIRRO: Baadhitaanka bannaan ee Juno wuxuu ina tusayaa quruxda tiirarka Jupiter
Vanuatu, oo ah gobolka adduunka ugu nugul isbeddelka cimilada
Maxay yihiin aafooyinka dabiiciga ah ee sida aadka ah u saameeya adduunka?